Kedu ihe dị iche na Camber pụrụ iche na Stumpjumper? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Stumpjumper vs camber - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Stumpjumper vs camber - akwụkwọ ntuziaka zuru ezu
Kedu ihe dị iche na Camber pụrụ iche na Stumpjumper?
Isiọdịichebụ na ngwaahịaCambernwere obere njem na azụ (120mm ma e jiri ya tụnyere 140mm maka aMpempe akwụkwọFSR) na e nweghị carbon eriri etiti ma ọ bụ ụbụrụ ujo nhọrọn'ime Cambernso.Eprel 6 2011
Bụ a Stumpjumper a downhill igwe kwụ otu ebe?
Ma Ndị Pụrụ IcheMpempe akwụkwọna Santa Cruz Hightower bụ benchmark. Abụọ ndị aanyịnya igwebụ archetypes nkemgbadaigbu, ndọkpọ ugwu, na-enwe ezigbo oge ịnwe, ụzọ njem njemigwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ na ị na-achọ ugwu kachasị dị ọtụtụigwe kwụ otu ebeenwere ike, ndị a bụ ndị abụọ kachasị elu ịtụle.Eprel 17 2020
Ndewo. Aha m bụ Blake na m nwere mmasị na Nukeproof Mega Trail Bike. - Mba, mba mba, M Blake na nke a bụ nke m Canyon Sender Downhill Bike. - Ọ bụ ezie na T6 6061 m nke aluminom na-eme ka ọ dị kilogram 16.33, nke ahụ bụ 30 pound bang - Ha, aluminom, m nwere carbon n'ihu, azụ azụ aluminom, na 16 kilos 35.2 pound.
Mana lee anya na nke ahụ. Fox40 ndi a nwere 200 mil nke njem. See na-ahụ nke ahụ n'azụ ụgbọ ahụ? Fox ọzọ, 200 mils nke njem, kụrụ ụzọ ahụ. - Ọfọn nke ahụ ga - enyere gị aka mgbe ị rutere na ala nke ugwu ahụ ma nwee ịghaghachi ihe ahụ n'ụzọ niile ka m na - anya RockShox Lyrik n'ihu.
See na-ahụ na azụ? RockShox Monarch nwere njem njem 160, ihe niile m chọrọ - (ọchị) Obere? M nwere braking ike m chọrọ, nke ahụ bụ SRAM Guide 200 mil rotor gburugburu na m nwere ike ịkwụsị na jiffy .- Ọfọn, m nwere otu ihe ahụ, mana 180 mil, ihe niile m chọrọ. Mana lee anya na, SRAM Ugo 34 ezé dị n’ihu, 170 cranks mil na 10 ruo 50 n’azụ, ihe niile na-arị ugwu. - Chaị, mma, E wuru m maka ọsọ.
Enwere m agba agba SIXC cranks zuru ezu, 170 mil ogologo na SRAM X01 DH 7-Speed ​​na azụ, wuru maka ọsọ (ọchị). - Eeh, nọgidenụ na-achị ọchị, ka anyị hụ onye nwere ọchị ikpeazụ mgbe nke a gasịrị - Hi, aha m bụ Blake na m ga-abụ onye ọka ikpe gị taa na nsogbu mbụ m nwere bụ nnwale nnwale site na nke a ruo ugbu a, ị dịla njikere - Njikere! - Gaa! (Ọchị) - you dịla njikere maka ndagwurugwu Blake? - Nwanne, a ga m akụpụ gị n'ogige - Gaa! Pụrụ ịhụ otú ọsọ nzọ ụkwụ ụkwụ ụkwụ si ziri ezi si n'ọnụ ụzọ ámá na nke a gbawara n'etiti ihuenyo accelerates na-abịa ọsọ - na nke ahụ bụ otu ihe ọ bụla banyere nzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe. Na-esote, pịa. (Techno music) - Nke ahụ adịghị njọ maka obere igwe kwụ otu ebe. - Nke ahụ ezighi ezi, ọ bụ? Maazị
DH Blake, ha. Nke ziri ezi, nsogbu a bu nsogbu m. A na m ama gị aka ka ị si n’elu ugwu a na-amalite ugwu wee rute n’ọnụ ụzọ a n’elu ebe ahụ.
Dịla njikere maka nke a, Maazị DH Blake? - Ha, ọ bụghị n'ezie, ị buru ụzọ - Njikere. (Ogwu siri ike) - Enwere m usoro asaa, ọ dịghị mma, mana m ga-anwale.
Njikere. Chineke m. Oo chimoo. (Gasping) Ee, ị meriri igwe kwụ otu ebe - aka nri, nke ahụ bụ ihe ịma aka n'akụkụ nkuku.
Igwe eji agbada agbada agbada agbago, nke bụ ihe kachasị sie ike iweta. Yabụ na ọ bụ maka ọsọ, ịke na imezi iwu. Aga m alaghachite azụ. (egwu elektrọnik) - Agbanyeghị na DH Blake hichara akụkụ ahụ niile na ebe a na-agba ịnyịnya igwe, mana mgbe teknụzụ teknụzụ bidoro, egwuregwu igwe kwụ otu ebe na-eri ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ.
Otu maka ụkwụ anyịnya igwe. - Nri, nke a bụ ebe ọ na-atụgharị ihe niile gbasara nsogbu nke ibu ọsọ. 'D ga-eche na ngalaba teknụzụ ga-abụ nnwale kachasị elu na nke a, mana mba m mere nyocha m, atọ jumps dị ka atọ ndị a ebe a, n'ahịrị, ị ga-enwe ọsọ ọsọ iji mee ndị ahụ jupụta ma ọ bụrụ na ị gaghị eme ikpe.
Gaghị achọ dọkịta dị ka m You ga-achọ onye ọka iwu maka nke ahụ - Ah, dị mfe - Uh oh. Ọfọn, m kwaturu nke a ntakịrị, ọnụ ọgụgụ ahụ-otu na-awụlikwa elu, ọ na-esiri m ike karị na njem dị ukwuu na ntopute dị ka nke a otu, ibu ọsọ gị, nke ahụ pụtara na ọ bụrụ M N'okwu a, m ga-arụ ọrụ karịa ike ịpụpụ otu na ọzọ. Yabụ n'ụzọ ụfọdụ ọsọ m na-adị mfe n'iyi.
Yabụ Trailbike Blake merie, dọọ ya - ịma aka ọrụ aka, ee. Nri, teknuzu pụtara nkume, mgbọrọgwụ, ụzọ dị warara nke ụzọ, ọ bụghị nke dị elu, mana ọ bụ teknụzụ. Ka anyị lee ihe igwe kwụ otu ebe ndị a nwere inye na ọnọdụ a. - Nke ahụ dị nwayọ nwayọ.
Anọ m na-ele DH Blake ka ọ gafere, ọ gafere ebe a ngwa ngwa. Ọ turu ọnụ banyere njem njem 200, yabụ echere m na nke ahụ bụ ebe nke a batara. My 170 160 adabaghị na 200 mil DH igwe kwụ otu ebe.
I merie ule breeki. Hụ akara ọcha dị n'akụkụ aka nri m? Eeh, ebe ahụ ka ịmalite. Ọnwụ ọnwụ, aka na mkpịsị aka na ndị na-egbu egbu, ọnwụ jidere Ogwe ndị a na enweghị ire ere, nọdụ ala, enweghị mgbapụta, ọ nweghị ihe ọ bụla.
Nweta otu ọsọ ahụ wee bịa ebe a, wepụta arịlịka anyị, onye kachasị dị nso site na akara a bụ onye emeriri, onye ọzọ bụ onye mmeri. Ka nsogbu ahụ bido. - Lee anya na, nke ahụ bụ ebe m kwụsịrị ikpeazụ.
Do ndien ekem enye ama etre. (Ọchị) Mba! Ọ bụ maka na m gbachiri ụkwụ ihu ihu ntakịrị, ọ bụrụ na m egbochighị ụkwụ ihu, aga m eche na ọ mere ya. Enwere ike dị ukwuu na rotor 200 mil niile.
Downhill igwe kwụ otu ebe merie, ee! Ya mere gaa n'ihu, obere ihe ịma aka na-atọ ọchị dị n'etiti igwe kwụ otu ebe na igwe kwụ otu ebe, mana ị chere na onye mmeri kwesịrị inweta mmeri ahụ? Mee ka m mara na ihe ndị a n'okpuru ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ọmarịcha edemede ọzọ dị ka nke a, echefula ịpị na gburugburu obere ụwa gaa ebe a, ị ga-edebanye aha na ị ga-enweta otu ụbọchị kwa izu ịchọrọ ịhụ ọzọ. Edemede pịa n'okpuru, Freerider na Downhill, ọ bụ ezigbo akụkọ mara mma - nke a bụ akụkọ dị egwu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpị otu esi edozi igwe kwụ otu ebe na-eme nke ahụ, ọ mara mma. Echefukwala inye edemede a isi mkpịsị aka.
Stumpjumper bu uzo uzo?
ỌkọlọtọMpempe akwụkwọna-enyefe na nkwa nke ịbụ onye kachasịnzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe. IheMpempe akwụkwọST na-agbakwunye usoro ọhụụ ọhụrụ ya na obere usoro iji nye ndị na-agba ịnyịnya ịnya ịnya ịnya ịnya. IheMpempe akwụkwọEzubere EVO maka ndị na-agba ịnyịnya na-eme ihe ike.
nke ahụ bụ okwu na e nweela katalọgụ ọkachamara pụrụ iche katalọgụ kemgbe 1981 na ebe ọhụụ ọhụụ anaghị adị iche karịa nke bu ya ụzọ ọ bụ n'ezie igwe kwụ otu ebe kpamkpam ugbu a ọ bụ njem 130mm 29er na ndụdụ 140mm nke ejiri ihe niile n'uche. na-eme ihe a igwe kwụ otu ebe kwesịrị-ekwu okwu banyere nkwusioru mbụ na nnukwu ozi ọma ebe a bụ Nohorst ogologo nkwusioru layout ihe a ịnyịnya njikọ? Ihe na-eme ka oche dị n'elu oche nke kwesiri ka ọ dị mfe ma na -emepụta ihe dị iche iche na-eme ka ikpo okwu na-eme ka ọ bụrụ otu paịpụ ụkwụ na-arụ ọrụ site na njikọ iji nye 130 millimeters nke njem na-ejikwa otu ntakịrị ịmụrụ, pistin degressive ihe mgbochi nke na-enyere aka na-aga ụkwụ na ụkwụ, na-aga n'ihu na egwu na-aga n'ihu na-enyere aka na-awụ akpata oyi n'ahụ na-agbapụ ngwa ngwa site na obere bumps ma jiri nwayọ ma na-achịkwa karịa bigoneson na nkọwa nkọwa na ọkachamara kwuru ọtụtụ ihe ha mụtara iji mee ka ọhụụ ọhụụ a dị obere. a na-ejikwa ya mepụta etiti ọhụrụ nke ekwuru na ọ dị gram 2240, nke ahụ bụ ihe dịka gram 100 karịa onye bu ya ụzọ na ihe dịka gram 510 pere mpe karịa etiti Evo ahụ laghachi azụ. N'ezie, oghere dị n'ime ọkpọ ahụ dị ọkụ ma sie ike karịa mgbe ọ bụla, ị ga-ahụkwa ihe ndị ọzọ dị n'okporo ụzọ ụkwụ ndị ọzọ ga-enwerịrị, gụnyere ịgbanye ụzọ ntanetị, eriri taabụ na eriri na ọtụtụ nkwụsị taya, yabụ ka anyị ekwu okwu banyere geometry na-esote, na iche iche bụ ihe dịtụ iche na onye ọ bụla. icygba ịnyịnya ígwè nwere obere oche oche dị mkpụmkpụ wee nwee ike ịdị iche na ntanetị na iche echiche na ị họrọ igwe kwụ otu ebe kachasị mma maka ụdị ịnya gị. Workrụgharị agba agba si s1 nke bụ 410mm site n'okporo ụzọ gaa s6 na iru 530mm na iche iche na-ekwu na ọ bụrụ na ịnọ n'ụgbọala dị n'etiti site n'ụdị ọzọ, ị nwere ike ịnọ na s3 ha ma ọ bụrụ na ịchọrọ nkwụsi ike ọzọ ị nwere ike ịkwalite na s4 nke nwere ogologo iru ma ọ bụ na-ebugharị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ dịkwuo mfe ị nwere ike ịkwalite na S2 maka obere mkpirisi ụkwụ na mkpụmkpụ karịa m 5 ụkwụ 10 na nke ahụ bụ Ans4 nwere ọtụtụ 475 millimeters nke na-eche mara m mma.
Enwere ihe mgbapụta na azụ azụ ujo ma nke ahụ na-enye gị mgbanwe milimita asaa nke dị elu na ọkara ogo ogo mgbanwe. Ọ dị mma, ka anyị lelee nọmba ndị ọzọ anya na ihe ndị a niile dị na obere lacquer n'ihi na ọ bụ ya bụ ihe ị ga-etinye na nke ahụ bụ ebe ị nwere ike ịhapụ 65 ogo isi nkuku na 76 ogo oche nke Odi ihe kariri nke gara aga Stumpy ka anyi leba anya na igwe ugbo ala aluminom ohuru nke ezin’ulo Stumpjumper Odi uzo abuo ichoro, ha di dolla iri ato na abuo na abuo na abuo na achoro ikwusi na ha abuo ka na-eji nkwụnye njikọ njikọ Horst nke pụrụiche na-eme ka aluminium na-atụgharị ụkwụ na-agbada ntakịrị, na-amalite site na Model Model nke bụ 4,000 American ma enwere di na nwunye ụdị dị n'etiti na nke a na-arụ ọrụ 9,500. American na ị na-enweta ihe niile a na-eme na axle mbanye na ụlọ ọrụ nkwusioru si Foxit, nwekwara ihe axle dropper post na ihe niile na-eme maka ezigbo ọcha, ọfụfụ akpati, ihe niile na-agbadata 27 pound isii Ounces totaled as you see ya, ma nke ahụ gụnyere taya njikwa anyị.
Na mgbakwunye, nke ahụ bụ nkọwa niile na Newstumpy ka anyị gafere ma kwuo maka otu o si arụ ọrụ. Ka anyị kwuo banyere ntọlite, tupu anyị ekwuo maka ịnya ịnyịnya na ịnwale ule pụtara ịlele taya. Nke ahụ bụ kpọmkwem ọkachamara ahụ.
Enwere Dhf n’ihu nke etinyere na 21 psi na azụ na azụ enwere dissector agbabara na 23 psi ma enweghị Fox Factory nkwusioru, enwere 34 nwere Grip2 damper r katrij m nọ n’elu Akụkụ nke ikuku akwadoro mgbali, na m na-eji na-atụ aro damper ntọala na ndụdụ maka n'azụ wheel. Emechara m na 13mm slack na mgbochi mmiri na nke ahụ dị n'okpuru 180psi ihe ọzọ edeturu na-abịa na ngwongwo mgbanwe ngwaahịa, mana m wụnye nke ọhụrụ m na-enwekarị mmasị. Rịgo abịa mbụ na akụkọ na nke gara aga bụ ọkachamara.
Ọfụma ihe gara aga abụghị akpa igwe, ọ bụ naanị igwe kwụ otu ebe ka ị ga - agbadata mgbe ọ bụla ị gbanye mgbatị na - enyere aka aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ dị mma ma ọ na - enye gị ọtụtụ traction ugbu a na ịnyịnya na-arahụ, bụ ya a dị iche iche akụkọ na ọhụrụ stub na azịza ya bụ nnọọ: ee m ga-akọwa ihe isi ike ọhụrụ dị ka a igwe kwụ otu ebe na-akwụghachi gị ike mgbalị mgbe ọ bụ m? Gba ịnyịnya ígwè a mgbe m na-apụ na sadulu ma na-arụ ọrụ igwe kwụ otu ebe ọ dị m ka ọ chọrọ ịga n'ihu ọsọ ọsọ Seat na ị na-agbasi ike ike ma ọ dị ka, ee anyị rutere ebe ahụ, ị ​​maara na igwe kwụ otu ebe na-ekwu dị ka ee, anyị ga-eme ya , anyị rutere n'ebe ahụ, ị ​​ga-esi n'oche a na-agba ịnyịnya ígwè a, ị na-agbasi ike ma ọ juputara n'ike na ndụ jupụtara na nke ahụ pụtara na m jupụtara n'ike na ọbụnadị n'okporo ụzọ Obi jupụtara na ndụ, ọ na-eme ya dabere na piston ndị a na-agba agba ma ọ bụ na ọ bụ mgbanwe na nhazi m ejighị n'aka, mana otu ihe m maara bụ na ndị hụrụ ịrịgo n'anya, ndị chọrọ ịkwụghachi ụgwọ maka mbọ ha, nke ọma Stumpjumper, nke a kachasị ọhụrụ , ọ ga-abụ kpọmkwem Ka anyị kwuo banyere traction karịa ihe niile izugbe ihe ọmụma ga-eduga gị ikwere na a 4 mmanya Horselink igwe kwụ otu ebe ga-enye karịa nke a karịa ihe ọ bụla dị ka na ị maara ihe nke ahụ nwere ike ịbụ eziokwu na mbụ ogbi na Horselink layout ee ọ nwere ike inye igwe kwụ otu ebe a karịa traction mana ọ dịghị mgbe m spunouti nke ahụ abụghị tr ue m dabbed a di na nwunye nke ugboro ma ọ bụ mgbe ys m emehie m dabs ha ha na-abụkarị ndị na-agba ikuku ha na-adịghị na-adabere na igwe kwụ otu ebe na m enwekwaghị mmetụta na m na-azụ na a igwe kwụ otu ebe dị ka traction bụ bụrụkwa ihe ma e jiri ya tụnyere nke ochie ahụ bụzi nnukwu akụkụ m na-arịgo mgbe m nọ na aka na ukwu mara mma na teknụzụ mara mma rooty na ezigbo mmiri, mara mma nwayọ na ụfọdụ n'ime ya siri ike kwa, ọ meela ezigbo mmiri na-ada ebe a. ị maara na enweghị m nsogbu ọ bụla na igwe kwụ otu ebe a na enweghị m nsogbu karịa onye ọ bụla, yabụ ị dị mma na ọ bụ oge ikwu okwu maka ịlaghachi azụ, ma ọ bụrụ na ị gụọ nkọwa PB mgbe agbapụtara ọhụụ ọhụrụ a , ị nwere ike ịbụ na ị nwere echiche na na-enweghị nkwonkwo agbakwunyere ịnyịnya ị nweghị ike ịnya ịnyịnya ígwè gị gbadata n'ugwu, nkwusioru ahụ agaghị arụ ọrụ, ị ga-agbanye aka na nke ahụ ga-abụ, nke ahụ abụghị ikpe ma ọlị, na millimita 130 nọ na-arụsi ọrụ ike ọ bụ ezie na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe a na-agbanwe agbanwe s P-Zug, nke na-eji eriri igwe mmiri dị ka nke a dị ka mandrel ojii nke nwere 10 milimita karịa njem, ka na-ada ụda ma na-agbaghara ma ugbu a enwere m obere nchegbu banyere piston na-ebelata, nke mere m ji chọọ iji kwuo banyere nkasi obi dị ike ma na-arụsi ọrụ ike, na piston ahụ na-agba ọsọ n'elu nke njem ahụ na-enye ntakịrị obere mkpakọ mkpakọ damping nke na-enye igwe kwụ otu ebe ntakịrị ndụ mgbe ọ na-agagharị, mana ọ dị ka ihe opupu ihe ubi nzọ ụkwụ agaghị emetụta. Ugbu a, ọ naghị adị ka ọ karịrị milimita 130, mana ọ ga-adị ka ọ nwere ihe na-erughị 130 millimeters nke njem. Ma na nsọtụ ọzọ nke Strokewell, akụkọ a mara mma otu ọ dị ka ọ dị n'oge emebiri emebi njem a ugboro ole na ole n'ime ihe m nwere ike ghara kụrụ, ma ọ bụghị mgbe ọ bụ nnukwu mkpọtụ ma ọ dịghị mgbe m chere na ọ site na nkwonkwo ụkwụ m TheShock Tune dị n'etiti, yabụ ọ bụrụ na ị buru ibu karịa m, m na-atụle ihe dịka 155 pound ma ọ bụ karịa, ịnwere ike itinye olu buru ibu na ọrịa strok na-aga n'ihu maka mgbatị karịa, mana ebe ọ dị mma m 155 paụnd arọ na ridden ndị mara mma ike ike ụzọ ụkwụ, Squamishi nnọọ obi ụtọ na otú na The nkwusioru bụ dịtụ ọrụ na mmalite nke ọrịa strok, a otutu nkwado na mgbe ahụ a otutu ala-eguzogide na-abụghị ọgwụgwụ ma ọ bụrụ na ị na-akwọ ụgbọala na anya gị mechiri emechi na dị nnọọ slamming na un tere akara na 130mm nkwusioru njem nke ọhụrụ stumpy na-eche n'ụzọ dị ike ma mechie, ma karịsịa ọma adabara onye chọrọ iji na-agba ịnyịnya a obere-ọrịa strok ike na ike ike teren, na bike bụ obere acti ve, ma na-enweghị nke a ịnyịnya nkwusioru m na-achọpụta na n'azụ ọgwụgwụ ọzọ ike n'okpuru brek ọma na-eme ihe n'eziokwu ya naanị nwere 130 millimeters nke njem na ọ dịghị, Ọ na-adị m ka azụ azụ mgbe niile na-arụ ọrụ nke ọma m ma ọ bụrụ na ọ bụ a igwe kwụ otu ebe na ogologo njem, ma ọ bụrụ na ọ bụ 160 ma ọ bụ 170 millimeters ndị ọzọ doro anya na e nwere a mgbanwe dị ukwuu na nkwusioru ala, ma alize mere a n'ezie ezi ọrụ ebe a iji mepụta ihe ka na-arụ ọrụ ma ka na-arụ ọrụ nke ọma, nke a 130mm aka na ukwu jumper, ma e wezụga ụgbọ okporo ígwè P, ọ bụ n'ezie igwe kwụ otu ebe mere ka m nwee ahụ iru ala na ọdịda, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ na-ebu ọnụ ma na-atụ ụjọ, na na agbanyeghị na m dị ka ogwe osisi ahụ nwere ndụdụ millimita 140 na ụfọdụ igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ nwere 150 na 160 millimita ndụdụ enwere nnukwu ọdịiche, mana ọ dị ezigbo mma ma a bịa n'ihe njikwa, mgbe ị nọ n'okirikiri ala, mgbe ọkachamara ahụ nwere ike igwu egwu na ike ya, nke ahụ bụ ihe na - eme ka nnukwu igwe kwụ otu ebe ndị a dị nwayọ nwayọ , ọ bụrụ na ịnyịnya gị niile bụ ihe niile ụzọ gbagoro na ala niile, nke ahụ bụ otu ihe, mana ọ bụrụ na ịnya ịnyịnya gị kpuchie ọtụtụ ebe ị na-agbada, ị ga-arịgo ala, ọ na-agwakọta ihe ngọngọ ụkwụ ya, ọ dị ka ọ bụ maka ụdị a nke ala ka anyị gaa na oge ahụ, anyị ga-ekwukwa banyere ịrịgo mbụ, ngalaba anyị ịrịgo bụ agwakọrịrị na teknụzụ otu ụzọ nwere oke aghụghọ nke jupụtara na mgbọrọgwụ na okwute gaa ebe dị mma, ọkachasị ezigbo ọdịda, ka emechara , masịrị bụ 33 sekọnd n'azụ ibu n ihe dị ka nkeji 12 oge anyị jupụtara na mgbọrọgwụ na nkume ma enwere ụfọdụ ngalaba dị elu dị elu iji nwalee igwe kwụ otu ebe na nke a, enwekwara ụfọdụ nsogbu na-agabiga na ụfọdụ akụkụ aghụghọ, n'ihi na ugbu a nzọ ụkwụ anyịnya igwe ga-adị mma na ihe niile, ugbu a ihe karịrị anọ na ọkara nkeji.
The ọkachamara masịrị jumper nwere nke abụọ kasị oge, 11 sekọnd n'azụ Acto 5ptrain na a abụọ n'ihu nke Salsa si Blackthornelet Ikwu banyere nrịgo na ala nke mmiri, anyị ga-ekpuchi ezi ihe mbụ. Nke a bụ igwe kwụ otu ebe S-Work, yabụ na-abịa n’ụfọdụ ihe dị elu tinyere draịral axle nke n’enweghị ntụpọ n’oge m n’ịgba ịnyịnya ígwè. M ga-asị na m hụrụ n'anya otú ọcha kokpiiti anya matchmaker clamps, e nwere nanị otu mwekota n'akụkụ nke ọ bụla nke handlebar na a brek sooks na e axle n'akụkụ na ọ dịghị ihe ọzọ ọ dị mma, ọ na-abịa na a Fox34 ndụdụ na otu Jide 2 Damper Ugbu a, e nwere ọtụtụ ịnyịnya ígwè na-aga ebe ahụ na-abịa na Fit4 damper nke na-enye gị ọnọdụ nkwụsị ụkwụ atọ, yabụ ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na-agba ịnyịnya nke na-achọ ịpụ sadulu ahụ ọtụtụ, ma eleghị anya ị ga na-agba ọsọ n'okporo ụzọ ịnyịnya ígwè gị, ma eleghị anya ị ga-ahọrọ ka mmiri anọ ahụ dabara n'ihi na ị nwere ike ịgbanye mgba ọkụ ahụ, ndụdụ ahụ agaghịkwa mgbe ị ga-esi n'oche ahụ pụọ, ihe mgbochi 2 na-agbanwe agbanwe ma na-enyekwu ike, mana o nweghi onye enyemaka pedal a dika nke ikpeazu Ihe m choro ighoputa bu nke ndi carbon a bu ihe ndi ozo nke ha bu 29 millimeters n'obosara ma ha ka di oke onu oh ndi a nwere ihe ohuru anọ nke milimita pulp te flat top pearl ihe kpatara ya m kwuru na nke a bụ ibottod si na taya na igwe kwụ otu ebe a a dum ụyọkọ nke oge na-egbusi nkume ụdị nile nke ihe na ọ bụghị naanị na m emerụ rim, enweghịkwa m taya Bee Ya mere, ihe na-eme nwere anọ Millimita Ewepụghị Top rim Uru na ọghọm, Next Uru Nke mbu Ihe ohuru a bu ihe mejuputara ichoro ichoro icho ubochi nile.
Chọpụta Want Chọrọ Gbaa ịnyịnya Sfọdụ Sketchy Stuff Ọ bụrụ na Are Dị Nghọta Ya mere, Mee Otu N'ihi The Next Up Prowell Rider Onye ọ bụla nke na-enwe mmasị a ngwa ngwa energetic igwe kwụ otu ebe ga-n'anya ọhụrụ stumpy na m na-arụtụ aka na nke a abụghị nke ikpeazụ stumpy ihe ikpeazụ bụ crazy ihe ndị a n'oge a nzọ ụkwụ anyịnya igwe nwere ike ime nke ahụ bụ a 130mm touring nzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebe na 140mm ndụdụ na m rutere site nkwusioru arụmọrụ na otú mechie ọ bụghị naanị na igwe kwụ otu ebe bụ nnọọ mma ọ na-amịkọrọ obere ihe niile ọ na-ejikwa nnukwu ihe nke ọma na na-enye gị ọtụtụ njigide ọghọm dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwanye ókè na ala siri ike enwere ike ịnyịnya ígwè ndị ọzọ ị ga - aka ga - eguzo karịa isi ike dị ugbu a, na - eche na ị nọ na igwe kwụ otu ebe kama ịnwe enduro -Bikes ma ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe, anyịnya igwe dị ka ndị a alsa blackthornethe p ụgbọ okporo ma ọ bụ stumpyevo ga-aka mma ga-abụ oke maka gị ọ na-ewetara anyị ruo ụbọchị? Echere m na anyị na-ahụ igwe kwụ otu ebe ọhụụ ndị a nwere ihe dịka 160mm forks forks na ogologo azụ triangles n'ihi na ndị mmadụ chọrọ ka ụkwụ ụkwụ ụkwụ ha bụrụ nke kacha mma, mana oge ụfọdụ anyị nwere ike ịlafu ntakịrị atụmatụ ahụ. ọ bụrụ na ị na-achọ otu igwe kwụ otu ebe dị okirikiri nke nwere ike ime ya niile ma ọ na-adị ka ọkụ, ọsọ ọsọ, ịgba ọsọ ụkwụ ụkwụ ka ị wee ghara ịhapụ nyocha nyocha ọ bụla na-abịanụ na mkparịta ụka okpokoro a niile.
Bụ Stumpjumper a enduro igwe kwụ otu ebe?
Ọhụrụ Ahụ Pụrụ IcheMpempe akwụkwọBụ Mkpa ọkụIgwe kwụ otu ebemaka Ndị Uzo Dị Taa. Ma mgbe ha mere nnukwuigwe kwụ otu ebe, ọ na-abụkarị ezigbo (n'ezie) nnukwuigwe kwụ otu ebe. Ihe atụ gụnyere Tarmac, Creo SL, Diverge, Epic (na Epic Evo),Enduro. Companylọ ọrụ ahụ na-esetịpụ akara maka arụmọrụ nke onye ọ bụla ọzọ na-anwa izute.Ọkt 13 2020
Bụ Stumpjumper ihe niile ugwu igwe?
Pụrụ iche'sMpempe akwụkwọỌkachamara 2021 na-ewuli n'ihe nketa akara ahụ akara tupu o nye sus zuru ezuIgwe MTBna bụ agile, na; na-na-akụ na nzọ ụkwụ.Ọkt 14 2020
Ngwunye Stumpjumper ọ bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
Otu n'imenke kacha mmana-ere igwe kwụ otu ebe na ahịa ahụ, ọ bụghị ihe ijuanya na ụdị mbido nke 2021 ndị na-agba ọsọ na-akwụsịghị ogologo oge. Anyị nwere a nso lee anya naStumpjumper alloyna dị ka mgbe niile, anyị nwere nnọọ obi ụtọ! ỌG GR G ỌGER The ỌG TheG The S-Sịị geometry nke ọhụrụMpempe akwụkwọakụrisị na-atọ ụtọ ụtọ ntụpọ.Ọkt 28 2020
Bụ Stumpjumper bụ ezigbo igwe kwụ otu ebe?
O doro anya na 2021Mpempe akwụkwọbụnnukwu igwe kwụ otu ebemaka ezigbo igwe kwụ otu ebe; onye chọrọ ịnyagharị ọtụtụ ụzọ dị iche iche ma ọ bụ na etiti okporo ụzọ, ogologo epis na-agbagharị agbagharị ma ọ bụ na-agagharị singletrack.Ọkt 13 2020
End Enduro anyịnya igwe dị mma maka ịgba ịnyịnya?
Anenduro igwe kwụ otu ebega-enwekarị n'etiti 140 na 180 mm nke njem. Anzọ ụkwụ igwe kwụ otu ebega-enwe ihe ruru 140 mm njem. A ngwa ngwa ọchịchị nke isi mkpịsị aka ebe a bụ na n'ihi na nke ogologo njem iheenduro igwe kwụ otu ebega-anabata ihu ala anzọ ụkwụkarịa ịbụ igwe na-arụ ọrụ nke ọma. Ihe kpatara nke aenduroọduọ.
A ga-enwe 2021 Stumpjumper?
N'ihi na2021iheStumpjumper gatụgharịa naanị na wiil 29 ″, ka na-egosipụta igbe SWAT gosipụtara, ihe mgbapụta na SRAM UDH dropout. A na-enweta igwe kwụ otu ebe ma obu carbon ma ọ bụ aluminom na mkpokọta nha isii. ỌhụrụMpempe akwụkwọatụmatụ a tụgharịa mgbawa na ujo ujo.Ọkt 13 2020
Cannondale ọ ka ndị ọkachamara mma?
Brandsdị abụọ ahụ na-enye okpokolo agba dị egwu.Uzochukwuejiri mee ka osisi aluminom dị mfe mana ụbọchị ndị ahụ agafeela. N'agbanyeghị nke ahụ, ha na-eme okpokolo agba kachasị mma ị nwere ike ịzụta, mana ọ dịkwaPụrụ iche. brandsdị abụọ ahụ na-enye ezigbo aluminom na okpokoro agba maka igwe kwụ otu ebe dị elu.
Gịnị bụ ihe dị iche na a Pụrụ iche Stumpjumper na St?
A sị ka e kwuwe, ọ bụ igwe kwụ otu ebe nke na-ele anya na-emewanye ihere na oké osimiri nke ọhụụ, njem ọgba tum tum dị mkpụmkpụ site na ụdị ndị ahịa dị obere nwere ike ịzaghachi na ahịa ngwa ngwa karịa nnukwu nkịta. Ka o sina dị, enwere m obi ụtọ ịhụ Specialized dochie Camber na Stumpjumper 'ST'.
Kedu ka Pike dị na Stumpjumper?
Na RockShox spec’d Stumpys, dị ka “Ọkachamara”, ụdị ST na-ahụ Pike (35mm stanchion). All 29 ″ ụdị nwere 51mm nke dechapụ. Dị nnọọ ka njedebe ihu, ụdị ndị ahụ na-eme njem ndị ọzọ na-ahụ ogologo ujo, nke nwere ike ịla azụ na azụ azụ.
Kedu ibu stanchion dị na Stumpjumper St?
The Stumpjumper ST na-egosipụta Fox 34 (n'aka ekpe), na ọkọlọtọ Stumpjumper na-ahụ ọtụtụ ihe ọkụkụ 36. Nọmba ndị ahụ na-egosi oke stanchion, nke na-agbatị ozugbo na njikwa, isi ike na nkenke. Na RockShox spec’d Stumpys, dị ka “Ọkachamara”, ụdị ST na-ahụ Pike (35mm stanchion). All 29 ″ ụdị nwere 51mm nke dechapụ.